काठमाडौं ।संसद सचिवालयको व्यवस्थापनप्रति राष्ट्रियसभा सदस्य विमला राई पौडेलले असन्तुष्टि जनाएकी छिन् ।राष्ट्रियसभाको आईतबारको बैठकको बिशेष समयमा बोल्दै उनले सामान्य व्यवस्थापनमा पनि सचिवालयले ध्यान दिन नसकेको गुनासो गरेकी हुन् । पटक पटकको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सिंहदरबारस्थित दिगो विकास समिति र विधायन समितिको सचिवालयमा महिला र पुरुषका लागि ट्वाईलेटको व्यवस्थापन हुन नसकेको उनको गुनासो थियो ।ट्वाईलेटको व्यवस्थापन गर्न अनुरोध गर्दै आफू महासचिवदेखि ठेकेदारसम्म पुगेको फेहरिस्त उनले सुनाइन् । सचिवालयले समयमा बैठकबारे सांसदलाई जानकारी नगराउँदा बैठकहरु प्रभावित हुने गरेको र सांसद अनुपस्थित भएका कारण कोरम नपुगेर बैठक प्रभावित भएको समाचार आउने र अन्तत त्यसको दोष सांसदमाथि नै थोपरिने गरेको गुनासो गरिन् । उनले भनिन् “आफूलाई दिएको जिम्मेवारी प्रभावकारी रुपले पूरा गर्दैन भने त्यो कर्मचारीलाई के गर्ने ? फेरी जनतामा जान पर्दैन ? फेरी लोकसेवा दिनुपर्दैन ? लोकसेवा पास गरिसकेपछि स्थायी सरकार भएर बस्ने भन्दा आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगर्ने कर्मचारीलाई फाल्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्यो । कर्मचारीको कार्य प्रभावकारीताको अनुगमन गर्नुपर्यो । अनुगमनको पनि अनुगमन हुनुपर्यो ।”उनले सचिवालयमा प्रशासन, सूचना सम्प्रेषण र व्यस्थापनमा समस्या देखिएको बताइन् । स्थायी सरकारको रुपमा हेरिने कर्मचारीहरुले राम्रोसँग काम नगर्दा सम्पूर्ण दोष जनप्रतिनिधिमा आउने गरेको भन्दै सचिवालयलाई व्यवसायीक बनाउनु पर्नेमा जोड दिइन् । उनले कार्यदक्षता र प्रभावकारीता नभएका कर्मचारीलाई हटाउन सक्ने गरि कर्मचारी नियमावली संसोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याइन् ।उनले भनिन् “एकपटक लोकसेवा पास गरेपछि ढुक्क भएर बस्ने होइन । कार्यदक्षता र प्रभावकारीता भएन भने करारमा राख्ने र परिर्वतन गर्न पाईयोस् । बाहिर बजारमा भर्खरै पास गरेका असाध्यै राम्रा युवा युवतीहरु छन् । जसले नेपालमा काम नपाएर बाहिर गईरहेका छन् । त्यस्ताहरुलाई ल्याउने व्यवस्था गरियोस् ।”राष्ट्रियसभा सदस्य मुक्ता कुमारी यादवले प्रशासन र राज्यसत्ताको आडमा मुलुकका विभिन्न स्थानमा हत्याका घटना भईरहेको आरोप लगाइन् । धनुषाका दिलीप भनिने ओम प्रकाश महतो, यसअघि आफ्नै छोरा रुपेश भनिने लोकेश कुमार यादव, निर्मला पन्त लगायत मुलुकभरका हत्याका घटनामा प्रशासनको संलग्नता रहेको दाबी उनले गरिन् ।प्रशासनको मिलेमतोमा पर्यावरणीय अभियन्ता ओम प्रकाश महतोको हत्यालाई दुर्घटना जस्तो देखाउने काम भएको उनले तर्क गरिन् । महतोको धारिलो हतियार प्रयोग हत्या गरि गरिएको र दुर्घटना हो भन्ने देखाउन ट्रिपर मुनि लगेर राख्ने काम गरिएको तथा प्रहरीले पनि घटनास्थलमा मुचुल्का पनि नउठाई मरिसकेको व्यक्तिलाई अस्पताल लैजाने काम गरेबाट मिलेमतो पुष्टी भएको तर्क उनको थियो ।बैठकमा सरकारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको बार्षिक प्रतिवेदन २०७५/२०७६ पेस गरेको छ । सरकारको तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङ्गले प्रतिवेदन बैठक समक्ष पेस गरेका थिए । त्यसैगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन) विधेयक ०७५ सम्बन्धी विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन पेश भएको छ । बैठकले रेल्वे विधेयक ०७६ लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको छ ।आईतबारकै बैठकले गृहमन्त्री राम बहादुर थापाले राखेको अन्तरदेशीय संगठित अपराध विरुद्धको महासन्धि अन्र्तगतको पालेर्मो अभिसन्धिलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक सोबार अपरान्ह १ बजेका लागि बोलाईएको छ ।
५ माघ २०७६, आईतवार १७:०८
संसद सचिवालयको व्यवस्थापनप्रति राष्ट्रियसभा सदस्य विमला राई पौडेलले असन्तुष्टि जनाएकी छिन् ।
राष्ट्रियसभाको आईतबारको बैठकको बिशेष समयमा बोल्दै उनले सामान्य व्यवस्थापनमा पनि सचिवालयले ध्यान दिन नसकेको गुनासो गरेकी हुन् । पटक पटकको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सिंहदरबारस्थित दिगो विकास समिति र विधायन समितिको सचिवालयमा महिला र पुरुषका लागि ट्वाईलेटको व्यवस्थापन हुन नसकेको उनको गुनासो थियो ।
ट्वाईलेटको व्यवस्थापन गर्न अनुरोध गर्दै आफू महासचिवदेखि ठेकेदारसम्म पुगेको फेहरिस्त उनले सुनाइन् । सचिवालयले समयमा बैठकबारे सांसदलाई जानकारी नगराउँदा बैठकहरु प्रभावित हुने गरेको र सांसद अनुपस्थित भएका कारण कोरम नपुगेर बैठक प्रभावित भएको समाचार आउने र अन्तत त्यसको दोष सांसदमाथि नै थोपरिने गरेको गुनासो गरिन् । उनले भनिन् “आफूलाई दिएको जिम्मेवारी प्रभावकारी रुपले पूरा गर्दैन भने त्यो कर्मचारीलाई के गर्ने ? फेरी जनतामा जान पर्दैन ? फेरी लोकसेवा दिनुपर्दैन ? लोकसेवा पास गरिसकेपछि स्थायी सरकार भएर बस्ने भन्दा आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगर्ने कर्मचारीलाई फाल्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्यो । कर्मचारीको कार्य प्रभावकारीताको अनुगमन गर्नुपर्यो । अनुगमनको पनि अनुगमन हुनुपर्यो ।”
उनले सचिवालयमा प्रशासन, सूचना सम्प्रेषण र व्यस्थापनमा समस्या देखिएको बताइन् । स्थायी सरकारको रुपमा हेरिने कर्मचारीहरुले राम्रोसँग काम नगर्दा सम्पूर्ण दोष जनप्रतिनिधिमा आउने गरेको भन्दै सचिवालयलाई व्यवसायीक बनाउनु पर्नेमा जोड दिइन् । उनले कार्यदक्षता र प्रभावकारीता नभएका कर्मचारीलाई हटाउन सक्ने गरि कर्मचारी नियमावली संसोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याइन् ।
उनले भनिन् “एकपटक लोकसेवा पास गरेपछि ढुक्क भएर बस्ने होइन । कार्यदक्षता र प्रभावकारीता भएन भने करारमा राख्ने र परिर्वतन गर्न पाईयोस् । बाहिर बजारमा भर्खरै पास गरेका असाध्यै राम्रा युवा युवतीहरु छन् । जसले नेपालमा काम नपाएर बाहिर गईरहेका छन् । त्यस्ताहरुलाई ल्याउने व्यवस्था गरियोस् ।”
राष्ट्रियसभा सदस्य मुक्ता कुमारी यादवले प्रशासन र राज्यसत्ताको आडमा मुलुकका विभिन्न स्थानमा हत्याका घटना भईरहेको आरोप लगाइन् । धनुषाका दिलीप भनिने ओम प्रकाश महतो, यसअघि आफ्नै छोरा रुपेश भनिने लोकेश कुमार यादव, निर्मला पन्त लगायत मुलुकभरका हत्याका घटनामा प्रशासनको संलग्नता रहेको दाबी उनले गरिन् ।
प्रशासनको मिलेमतोमा पर्यावरणीय अभियन्ता ओम प्रकाश महतोको हत्यालाई दुर्घटना जस्तो देखाउने काम भएको उनले तर्क गरिन् । महतोको धारिलो हतियार प्रयोग हत्या गरि गरिएको र दुर्घटना हो भन्ने देखाउन ट्रिपर मुनि लगेर राख्ने काम गरिएको तथा प्रहरीले पनि घटनास्थलमा मुचुल्का पनि नउठाई मरिसकेको व्यक्तिलाई अस्पताल लैजाने काम गरेबाट मिलेमतो पुष्टी भएको तर्क उनको थियो ।
बैठकमा सरकारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको बार्षिक प्रतिवेदन २०७५/२०७६ पेस गरेको छ । सरकारको तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङ्गले प्रतिवेदन बैठक समक्ष पेस गरेका थिए । त्यसैगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन) विधेयक ०७५ सम्बन्धी विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन पेश भएको छ । बैठकले रेल्वे विधेयक ०७६ लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको छ ।
आईतबारकै बैठकले गृहमन्त्री राम बहादुर थापाले राखेको अन्तरदेशीय संगठित अपराध विरुद्धको महासन्धि अन्र्तगतको पालेर्मो अभिसन्धिलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक सोबार अपरान्ह १ बजेका लागि बोलाईएको छ ।
राईको असन्तुष्टी, राष्ट्रियसभा सदस्य, व्यवस्थापन, संसद सचिवालय
Prevप्रदेश नं ५ को हिउँदे अधिवेशन शुरु
कृषि विकास बैंकको वित्तीय सूचकहरुमा उल्लेख्य सुधारNext